Ecar Sainte Anne Anjomakely – Page 3 – "Fianakaviana mino sy mifankatia no antoky ny fampivoarana."
Ry Havana, mety manontany tena isika hoe inona no tena dikan’ny karemy?
Ny tena dikan’ny teny hoe efapolo. Araka ny Testamenta taloha dia na io efapolo andro na efapolo taona,tamin’ny andron’i Noê dia nisy orana efapolo andro sy efapolo alina. Nivadika tamin’Andriamanitra ny vahoaka ka dia nofaiziny ary nodioviny ny tany tamin’ny alalan’ny rotsak’orana. Ka ireo izay nofidian’Andriamanitra sy nanaraka ny sitrapony sisa no velona, ny dikan’ny efapolo voalohany izany dia fiomanana miala amin’ny ratsy makany amin’ny tsara kokoa hatrany. Dia hitantsika ihany koa i Moizy nijanona efapolo andro sy efapolo alina tany an-tendrombohitra, nivadika tamin’Andriamanitra ny vahoaka Israely noho ny hanoanana ary nanao sary omby volamena izy ireo dia nivavaka teo fa tsy nieritreritra an’Andriamanitra,dia nandeha nitokana niresaka tamin’Andriamanitra i Moizy mba haka fiainana vaovao hiainan’ireto vahoaka ireto. Efapolo taona no nandehahanan’ny vahoakan’Israely ny tany efitra vao tonga tany amin’ny tany nampanantenaina izy ireo, midika koa izany fa fialàna amin’ny fiainana ratsy dia ny fanandevozana mankany amin’ny fiainana tsaratsara kokoa hatrany. I Jesoa dia nijanona efapolo andro sy efapolo alina tany an’efitra naneho ny finoany an’Andriamanitra sy nanomanany ny asa fitoriana izay ho ataony. Rehefa avy tany izy dia nandeha nitory ny fanjakan’Andriamanitra. Niomana I Jesoa amin’ny asa fanafahana izay ho ataony. Ny efapolo dia milaza fahalavorariana, miantso antsika Andriamanitra (suite…)
Continuer la lecture Toriteny Alahady 18 Febroary 2018
Ny fanosorana ny marary dia Sakramenta hanomezan’ny Fiangonana fanomezana manokana ho an’ny Kristianina mijaly noho ny aretina mafy sy ny fahanterana.
I Jesoa Kristy no namorona ny Sakramenta rehetra tamin’ny alalan’ilay rà sy rano nivoaka tamin’ny fony dia iny fahasoavana iny no raisintsika amin’ny alalan’ny Sakramenta.
Hoy ny Soratra Masina momba ny Sakramentan’ny fanosorana ny marary : « Misy marary ve ao aminareo ? Aoka izy hampaka ny pretran’ny Fiangonana ary aoka izy no hivavaka eo ambony sy hanosotra menaka azy amin’ny anaran’ny Tompo» Jak 5, 14-15
Ny tanjona kendrena dia : ny hanome fahasoavana manokana ny Kristianina misedra fahasahiranana noho ny aretina mafy na ny fahanterana.
Ny olona hosorana dia ny olona : (suite…)
Continuer la lecture Ny Sakramentan’ny Fanosorana ny marary
Misy anatra lehibe telo kosa ny nambaran’i Md Paoly ho an’ny Kôrintianina teo : (suite…)
Continuer la lecture Toriteny Alahady faha 11 Febroary 2018
Continuer la lecture Toriteny Alahady faha-4 Febroary 2018